Kulamo lagu damacsanyahay maamul loo dhanyahay oo Baladweyne ka sii soconaya – SBC
Kulamo lagu damacsanyahay maamul loo dhanyahay oo Baladweyne ka sii soconaya
Kulamo gooni gooni ah oo looga arinsanayo sidii maamul loo dhanyahay looga hirgelin lahaa magaalada Baladweyne xarunta gobolkaasi Hiiraan ayaa waxay ka soocnayaan hotelka madiina ee magaalada Baladweyne .
Kulamadaani ayaa waxay u dhaxeeyaan sida wararku aan ku heleyno, Odayaasha iyo waxgaradka gobolka, Maamuladii horay uga jirijiray magaaladaasi sida kii dowladii hore ee uu horkacayay madaxweyne C/laahi Yuusuf , Ahlusuna waljamaaca, iyo weliba dad la sheegay ina y dhax dhaxaadin u yihiin khilaafaadka dooxada Shabeele iyo DKMG ah .
Kulamada ayaa looga goleeyahay in maamul loo wada dhanyahay loogu sameeyo gobolka Hiiraan, kaasi oo sida la rumeysanyahay hoostagi doona dowlada KMG ah ee Soomaaliya .
Amuurahani oo dhan ayaa waxay imanayaan xili ay soo baxayaan hadalada ka soo kala baxaya saraakiisha maamulka dooxada shabeele oo isagu sheeganaya in uu yahay maamulka dhabta ah ee ka jira gobolka islamarkaana ay ka soo horjeesteen midka lawad wado ee ay DKMG ah ku damacsantahay in ay gobolka ka hirgeliso.
Ugu dambeyntii waxaa la ogyahay in hadii kulamadani uu ka soo boxo maamul loo dhanyahay waxaa meesha ka bixidoona maamulka dooxada shabeele oo u ololeeynaya in gacanku heynta maamulka gobolka siiba Baladweyne uu isagu leeyahay.